နေအိမ် / အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ / ခုံသမာဓိလွတ်လပ်ရေးနေ့: ခုံသမာဓိလွတ်လပ်ရေးနေ့တစ်ဦးအယူမှားဖော်ပြချက်များအတွက်အကျဉ်းထောင်မှပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း
ခုံသမာဓိလွတ်လပ်ရေးအမြဲအရေးကြီးသည်, ဒါပေမယ့်မလေးရှားတရားရုံးလွတ်လပ်ရေး၏မှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်အောင်များအတွက်အကျဉ်းထောင်တစ်ခုခုံသမာဓိရုံး convicting အတွက်ခါတိုင်းထက်နောက်ထပ်သွားပြီ.
တစ်ဦးကဗြိတိန်ခုံသမာဓိရုံးလွတ်လပ်ရေး၏မိစ္ဆာကြေငြာရာတွင်ထောင်ဒဏ်ခြောက်လချမှတ်ခံခဲ့ရ, ကဖော်ပြခဲ့သည်အဖြစ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဆန်းစစ်ခြင်း. မလေးရှားတရားရုံးမှအရ, အဆိုပါခုံသမာဓိရုံးဟာလမ်းလွဲ အနုညာတစီရင်ဘို့ကွာလာလမ်ပူဒေသဆိုင်ရာရေးစင်တာ ("KLRCA") လွတ်လပ်ရေး၏မှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်၏အခြေခံတခုတခုအပေါ်မှာခုံသမာဓိရုံးအဖြစ်သူ့ကိုခန့်အပ်သို့. ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဆန်းစစ်ခြင်း၏အဆိုအရ, အစိုးရရှေ့နေအဖြစ်အချက်အလက်များဖော်ပြထား "တစ်ဦးမရိုးမသား, အရခွေုံသောနှင့်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်လုပ်ရပ်"အဲဒီအဆိုးဟာ KLRCA များ၏ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်.
အဆိုပါ KLRCA စည်းကမ်းများ ဖော်ပြသည့်ခုံသမာဓိရုံးလွတ်လပ်ရေး၏ကြေညာချက်စေရမည်ဟုဖော်ပြကြဘူး. သို့သျောလညျး, အဆိုပါစည်းကမ်းများအပိုဒ်မှာပေး5အခွအေနဟာခုံသမာဓိရုံးအဆိုပါပါတီများကသဘောတူခဲ့ကြရာပေါ်မဆိုလိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းများအပိုင်မခုံသမာဓိရုံးရဲ့ဘက်မလိုက်မှုသို့မဟုတ်လွတ်လပ်ရေးအဖြစ်သို့မဟုတ်လျှင်မိတာဖြစ်သံသယမှမြင့်တက်ပေးတည်ရှိပါလျှင်တစ်ဦးခုံသမာဓိရုံးစိန်ခေါ်ခံရစေခြင်းငှါ. အဆိုပါစည်းကမ်းများခနျ့အပျအခွင့်အာဏာတစ်ရပ်လွတ်လပ်သောဘက်မလိုက်ခုံသမာဓိရုံး၏ချိန်း secure ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုပေး:
" ဆောင်းပါး 6. သတ်မှတ်နှင့်အာဏာပိုင်တွေကခန့်အပ် [...]
7. ခန့်အပ်ခွင့်အာဏာတစ်ရပ်လွတ်လပ်သောဘက်မလိုက်ခုံသမာဓိရုံး၏ချိန်း secure ဖို့များပါတယ်ကဲ့သို့သောထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်နှင့် ပတ်သက်. ရကြလိမ့်မည်နှင့်အကောင့်ထဲသို့ပါတီများ၏တိုင်းရင်းသားတွေထက်အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားအဖြစ်တစ်ခုခုံသမာဓိရုံးခန့်အပ်၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ယူရမည်."
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, အဆိုပါ ခုံသမာဓိ၏ ICC ကစည်းကမ်းများ အဆိုပါခုံသမာဓိရုံးလွတ်လပ်သောသူဖြစ်ရမည်ကြောင်းအထူးသပေးကခုံသမာဓိစဉ်အတွင်းပေါ်ထွန်းစေမည်အကြောင်းင်း၏လွတ်လပ်ရေးကိုရည်မှတ်မဆိုအခြေအနေထုတ်ဖော်ရမည်ဟု:
"ဆောင်းပါး 11: အထွေထွေပြဋ္ဌာန်းချက်
2) ချိန်းသို့မဟုတ်အတည်ပြုခြင်းမပြုမီ, တစ်ဦးအလားအလာခုံသမာဓိရုံးလက်ခံမှု၏ကြေညာချက်လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်, အသုံးပြုနိုင်မှု, ဘက်မလိုက်မှုနှင့်လွတ်လပ်ရေး. ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသို့ပါတီများ၏မျက်လုံးများအတွက်ခုံသမာဓိရုံးရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖုန်းခေါ်အဖြစ်အလားအလာခုံသမာဓိရုံးအတွင်းဝန်ရုံးမှထိုကဲ့သို့သောသဘောသဘာဝခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်အရာမဆိုအချက်အလက်များသို့မဟုတ်ခွအေနမြေားရေးသားခြင်းအတွက်ထုတ်ဖော်ကြမည်, အဖြစ်ခုံသမာဓိရုံးရဲ့ဘက်မလိုက်မှုအဖြစ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သံသယမှမြင့်တက်ပေးနိုင်တယ်လို့မဆိုခွအေနမြေား. အဆိုပါအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးအရေးအသားအတွက်ပါတီများတို့အားဤသို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသူတို့ထံမှတစ်စုံတစ်ရာမှတ်ချက်များအတွက်အချိန်ကန့်သတ်မှုကို fix ရကြလိမ့်မည်.
3) တစ်ခုကခုံသမာဓိရုံးကိုချက်ချင်းအပိုဒ်အတွက်ရည်ညွှန်းသောသူတို့အားအလားတူသဘာဝမဆိုအချက်အလက်များသို့မဟုတ်ခွအေနမြေားအတွင်းဝန်ရုံးမှရေးသားခြင်းနှင့်ပါတီများမှထုတ်ဖော်ကြမည် 11(2) အဆိုပါခုံသမာဓိစဉ်အတွင်းပျေါလာနိုငျသောခုံသမာဓိရုံးရဲ့ဘက်မလိုက်မှုသို့မဟုတ်လွတ်လပ်ရေးရည်."
အလားတူပင်, အဆိုပါ UNCITRAL အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ အဆိုပါခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုမှတဆင့်ခုံသမာဓိရုံးရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါအခွအေနတစ်ခုထုတ်ဖော်ပေး.
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေနဲ့ခုံသမာဓိရုံးအဖြစ်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ဖြစ်နိုင်သောချိန်းနှင့် ဆက်စပ်. ချဉ်းကပ်သောအခါ, သူသို့မဟုတ်သူမသူသို့မဟုတ်သူမ၏ဘက်မလိုက်မှုသို့မဟုတ်လွတ်လပ်ရေးအဖြစ်မိတာဖြစ်သံသယမှမြင့်တက်ပေးနိုင်ဖွယ်မည်သည့်အခွအေနထုတ်ဖော်ကြမည်. တစ်ခုကခုံသမာဓိရုံး, သူသို့မဟုတ်သူမ၏ချိန်း၏အချိန်ထဲကနေနှင့်ခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုတစ်လျှောက်လုံး, သူတို့ပြီးသားဤအခွအေနမြေားသူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏အားဖြင့်အကြောင်းကြားခဲ့ကြမဟုတ်လျှင်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲပါတီများနှင့်အခြားခုံသမာဓိလူကြီးမဆိုဤကဲ့သို့သောအခွအေနထုတ်ဖော်ကြမည်."
အောက် မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာကုဒ် မှားယွင်းသောကြေညာချက်များငါးခုထောင်ထဲမှာနှစ်သို့မဟုတ် / နှင့်ဒဏ်ငွေနှင့်အတူအပြစ်ပေးများမှာ.
417. အကြင်သူသည် cheats ငါးနှစ်အထိဖြစ်စေ, ဒဏ်ငွေနှင့်အတူသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူတိုးချဲ့ရသောတစ်ဦးသက်တမ်းအတွက်ထောင်ဒဏ်နှင့်အတူအပြစ်ပေးခံရကြလိမ့်မည်."
တစ်ခုံသမာဓိရုံး၏ဤခံယူချက်ခုံသမာဓိလူကြီးမိမိတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်စပ်လျဉ်းအချို့တရားစီရင်မှုအတွက်အလားအလာထောင်ချဖို့ ပို. ပို. ဘာသာရပ်များမှာဘယ်မှာအခြေအနေတွင်လာ. ဥပမာ, တဖက်သတ်ခုံသမာဓိရုံးယူအေအီးပြစ်မှုဆိုင်ရာကုဒ်တစ်ခုပြင်ဆင်ရေးအောက်ရှိယူနိုက်တက်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအကျဉ်းချစေခြင်းငှါ.
"ဆောင်းပါး 257. ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး, ခုံသမာဓိရုံးသို့မဟုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသူတစ်ခုသို့မဟုတ်တရားစီရင်ရေးသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်အာဏာကခန့်အပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပါတီများအားဖြင့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သူစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး, သူသိလျက်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုထုတ်ပေးဒါမှမဟုတ်ထင်မြင်ချက်ဖော်ပြခြင်းသို့မဟုတ်အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းသို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်အကြောင်းမရှိတင်ဆက်သို့မဟုတ်ထေူ, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏မျက်နှာသာအတွက်သို့မဟုတ်သူ့ကိုဆန့်ကျင်, တရားမျှတမှုနှင့် unbiasedness ၏တာဝန်ဆန့်ကျင်, ယာယီထောင်ချခြင်းဖြင့်အပြစ်ပေးခံရကြလိမ့်မည်. အဆိုပါဖျောပွအမျိုးအစားသူတို့အနာဂတ်အတွက်စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသည်လုပ်ငန်းတာဝန်များအားဖျော်ဖြေထံမှ precluded ခံရကြလိမ့်မည်.
အပိုဒ်၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များ (255) ဤဥပဒေရမညျလျှောက်ထားရမည်.“
andrian Beregoi, Aceris ဥပဒေ L ကိုLC